ကလေးတွေကို တီဗီဖွင့်ပြတာ ကောင်းလား? မကောင်းဘူးလား ? - Myanmarload
ကလေးတွေကို တီဗီဖွင့်ပြတာ ကောင်းလား? မကောင်းဘူးလား ?
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ် က 20:20 December 31, 2018
ကလေးတွေကို ထိန်းမရအောင် ဆော့နေတဲ့အခါ၊ ငိုနေတဲ့အခါ၊ ချော့ရတာ ခက်ခဲနေတဲ့အခါ ကာတွန်းကား ပြခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကား ပြခြင်း၊ အခြားသော တီဗီ အစီအစဉ်များ ဖွင့်ပြခြင်း စတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ ကလေးတွေကို ချော့မြှူ တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကလေးတွေကို တီဗီဖွင့်ပြတာ ကောင်းလား? မကောင်းဘူးလား ? ဆိုတာကို အနည်းငယ် တင်ပြချင်ပါတယ်။ တီဗီကြည့်ခြင်းက ကလေးတွေ အတွက် အမြဲတမ်း ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကလေးတွေကို တီဗီကြည့်စေခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများကတော့ ကလေးတွေအတွက်
- စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ရစေတယ်
- အသိပညာ တိုးပွားစေတယ်
- အားကစား အသိစိတ်ဓါတ်တွေ တိုးစေတယ်
တီဗီကြည့်တာ အချိန်များသွားတဲ့ အခါ ကလေးတွေအတွက် ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့
- တီဗီအရှေ့မှာ ထိုင်ချိန်များစေတယ်
- ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် တိုးစေတယ်
- လူမှု ဆက်ဆံရေး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု အားနည်းစေတယ်
- ခန္ဓာကိုယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းစေတယ်
- အပြောအဆို၊ အမူအရာ ကြမ်းတမ်းတာတွေ ကူးစက်စေနိုင်တယ်
ဖော်ပြပါ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိပြီး နောက် မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူများ အနေနဲ့ သတိပြု ဆင်ခြင်နိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို တီဗီကြည့်စေခြင်းမှာလည်း တန်ဆေး၊ လွန်ဘေး ရှိတာမို့ တီဗီက ကလေးထိန်း စက်ပစ္စည်း တစ်ခု မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သတိရပါ။ ဒါ့အပြင် ထမင်းစားနေချိန်၊ အစားစားနေချိန်မှာ တီဗီ ဖွင့်မထားသင့်ပါဘူး။ အိမ်ခါနီး အချိန်၊ အိပ်ချိန်နဲ့ နီးကပ်နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာလည်း တီဗီ ဖွင့်မထားသင့်ပါဘူး။
ဖော်ပြပါ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများကို သိရှိပြီးနောက် အားလုံးပဲ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ သာယာပျော်ရွှင်သော နေ့ရက်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။
Page generated in 0.1570 seconds with5database query and6memcached query.